Cashar barasho: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop, | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan ku sii wadnaa Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop, taas oo aan ugu soconeyno kiisa Qeybta 3-aad, halkaas oo aan ku diyaarinaynay koox sawiro ah Adobe Bridge si ay ugu shaqeeyaan iyaga gudaha Adobe Photoshop, meeshii aan rabnay inaan wax ka bedelno si aan u helno natiijada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Inaad awood u yeelato inaad iskudarsato kuwa kala duwan Adobe, Waxay noo keeni doontaa hawl socodsiin wax ku ool ah, oo lagu gaaro raaxo badan iyo natiijooyin ka wanaagsan sidii aad ula shaqeyn lahayd midkood oo keli ah. Tusaale ahaan, Adobe Photoshop waa barnaamij tafatirka muuqaalka weyn, hase yeeshe maahan wax fiican Abaabulaha curiyaha, sidee looga warwareegayaa Adobe Bridge. Adigoon sii dheerayn ayaan kaaga baxayaa casharka.
Hagaag, qaadashada wixii aan kaga tagnay tii hore tutorialWaxaan amar ku bixinnay sawirada kalfadhiga oo aan aad u jeclaanay, waxaan ka qaadanay ilaa 26 koox 51 ah, 26-kan la xushay waxaa loo kala saaray labo koox, oo aan u shaqeyn doono si kala duwan, sidaa darteedna waxaan sameyn doonaa talaabooyin kala duwan si aan u noqono awood u leh inay ku shaqeeyaan qaybo badan. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah waxaad kala tashan kartaa kuwayaga Cashar barasho: Workflow with Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 2aad).
1 Daaweynta sawirka
2 Sixitaanka Heerka
3 Siinta xoog
4 Saxida midabada
6 Naftaada u xukun
7 Go'aanka ayaa la qaatay
8 Waxaan bilaabaynaa inaan waxqabad ka dhigno
Sidii aan hore ku sharaxnay tutorial Waxaan bilaabi doonnaa taxane daaweyn ah sawirka aan soo qaadnay si aan u qaadno baaritaanka noo horseedaya inaan jadwal u sameyno kooxda sawirada la soo xulay. Marka aan dhammeeyo tijaabooyinka, oo aan ka fekero waxa aan doonayo inaan ku gaaro sawirradan, waxaan go'aansaday inaan sameeyo rmidab iyo iftiin midab leh, sixitaanka heerarka ay siisay sawirka kamaraddii aan adeegsannay, taasoo ku xirnaaneysa hal kamarad ama mid kale ayaa nooga tagi doonta heerarka qaar ama kuwa kale. Marka hore waxaan ku dabaqi doonnaa wax ka beddelka sawirka ka dibna abuuri doonaa falka. Marka hore waa inaad hayso warqad iyo qalin inaad awood u yeelatid inaad qorto qalabka iyo qiyamka aad bixinaysid iyo shaqo taas ayaa loo diyaariyey si aan awood ugu yeelano inaan isla barnaamij ahaan u dhigno isla tallaabada aan ku horumarin doonno.
Daaweynta ugu horreysa ee aan dalbaday waa sixitaanka heerarka nalka, galaya marinka Heerarka-Isku-hagaajinta Sawirka. Qalabkani waa mid aad u fudud in la isticmaalo, wuxuuna noo ogolaanayaa inaan saxno heerarka iftiinka guud ee sawirka, wuxuu noo ogolaanayaa inaan si sax ah oo wax ku ool ah u saxno madow, caddaan iyo cowska sawirka. Sida qalabka oo dhan Photoshop, waa inaad aad uga taxaddartaa sida loo adeegsado, maaddaama ay noo horseedi karto inaan si ka badan u hawlgalno sawirka, oo aynaan rabin. Marna. Waxaan ku qornaa qiimayaasha warqadda aan u hayno.
Xulashada xoojinta waxaa laga helayaa wadada Sawirka-Isku hagaajinta-Intensity, waxaana u adeegsaneynaa si aan u muujino heerarka midabka ee muuqaalkeena Lenny. Qalabkan way fududahay in laga gudbo, sidaa darteed waa inaan aad uga taxaddarnaa isticmaalkeeda. Waxaan ku dabaqi doonnaa qiimayaal aan ka badnayn 40 annagoo tixgelinayna kor ku xusan. Ha dhaafin. Ku qor qiyamka aaladda warqad yar.
Jidka loo maro Isku hagaajinta sawirka-sixitaanka xulashada, waxaan u haynaa qalab aad u badan Photoshop, taas oo naga caawineysa inaan isku dheelitirno midabada sawirada, isla'egno ama isku dheelitirno. Waxaan u isticmaali doonnaa inaan ka saarno taabashadaas jaallaha ah caddaanka iyo midabbada dhexdhexaadka ah ee aadka ugu xun sawirka, iyadoo muuqaal muuqaal dabiici ah u leh. Qalab kale oo ay tahay inaan ku noqonno xeelad iyo dulqaad ama haddii kale waxaan ka baaraandegi doonnaa sawirradeena. Qor qiyamka.
Adoo adeegsanaya qalabkan laga helay wadada Isku hagaajinta sawirka-Nuurka iyo isbarbar dhiga, waxaan siin doonaa iftiin dheeri ah sawirka iyo xoogaa yar oo ka-duwan, si aan u iftiiminno goobta iyo in midabada muuqda ee timaha Lenny istaag. Qor qiyamka.
Naftaada u xukun
Marka aan dhammeeyo codsashada daawooyinka kala duwan, xukumo haddii taasi ay tahay natiijada aad rabto, kaliya ma ahan sawirkan, laakiin taxanaha intiisa kale. Aad ayey muhiim u tahay inaad samirto oo aad ogaato waxa aad u rabto shaqo.
Go'aanka ayaa la qaatay
Markii aan ku qanacno in tani ay tahay taabashada aan dooneyno, waxaan tagnaa daaqadda Taariikhda Soomaaliya oo waxaan ku celinaa sawirka bilowgii, taasi waa, sidii ay ahayd markii aan furey.
Waxaan bilaabaynaa inaan waxqabad ka dhigno
Waxaan ku dhammeyneynaa qeybtaan tutorial, aruurinta xogta laga helay our shaqo leh sawirkan, fasiraadaha ku qoran warqadda. Barnaamij barnaamij waa wax fudud, hase yeeshe waa inaad raacdaa dhowr talaabo si aad ugu darto a socodka shaqada Dufcaddiiba, adigoon ka bixin waxa aan dooneyno. Si tan loo sameeyo, waxaan qori doonnaa amarka iyo qiyamka ay daaweyntii sawirka ee aan soo qaadanay tusaale noogu siiyay warqad yar.
In xiga tutorial Waxaan si buuxda u jadwal u sameyn doonnaa ficilka oo aan bilaabi doonnaa dufcaddii diyaarinta koox sawirro ah.
Macluumaad dheeraad ah - Cashar barasho: Workflow with Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 2aad)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 3-aad).